नयाँ वर्षमा छोरीज्वाइँसँग दाउरा बालेर मासु पकाउँदै प्रचण्ड, बाहिर पकाउनुको कारण यस्तो ! - Mitho Khabar
April 14, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नयाँ वर्षमा छोरीज्वाइँसँग दाउरा बालेर मासु पकाउँदै प्रचण्ड, बाहिर पकाउनुको कारण यस्तो !
काठमाडौं । आज नयाँ वर्ष २०७७ को पहिलो दिन । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण नेपालीहरुले उल्लासपूर्ण तरिकाले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न पाएनन् । सबै नेपाली यतिबेला घर भित्रै छन् । घरमै भएकाले परिवारका सदस्यहरुसंग जे उपलब्ध छ त्यही खाएर नयाँ वर्ष मनाइरहेका छन्। सबै नेपाली लकडाउनमा भएका कारण वाहिर सडक सुनसान देखिएका छन्।
अहिले राजनीतिक दलका नेता, कलाकार उद्योगी ब्यवसायी सबै फुर्सदिला भएका छन् । आवश्यक काम प्रमुख राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारण सबैले घरबाटै सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिरहेका छन् । नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक अर्कालाई दिइरहेका छन् । सबैको शुभकामना सन्देश कोरोनाबाट बच्न सकियोस् भन्ने छ।
यसैक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिए। उनले सन्देशमा घरमै बसेर लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे । उनी आफैं पनि लकडाउन घोषणा भएको दिनदेखि ललितपुरको खुमलटारस्थित घरमै बसेका छन् । उनले आफ्ना सबै राजनीतिक भेटघाट बन्द गरेका छन्।
नयाँ वर्षको दिन छोरीज्वाइँसँगै बसेर प्रचण्डले मासु पकाइरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । तस्बिरमा प्रचण्डले मासु चलाइरहेका छन् । आँगनमा दाउरा बालेर मासु पकाउने बेला छोरी गंगा र ज्वाइँ जीवन आचार्य साथमै छन् । प्रचण्डले घरभित्र नभई बाहिरै मासु किन पकाए होलान् भन्ने चासो देखिएको छ । प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल माछामासु नखाने भएकाले पनि बाहिरै पकाएको हुन सक्ने केहीले अनुमान गरेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा यस्तै प्रतिकृया आएका छन्।
महिला क’ण्डम कसरी प्रयोग गर्ने ? जान्नुहोस्
लकडाउनका कारण दूध बिक्री नभएपछि खेतमा फाल्न बाध्य कपिलवस्तुका किसान